ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုပြင်းထန်နေတဲ့ ချစ်၍ခေါ်ရာ” သီချင်းလေး နဲ့ မြတ်သူသူ ရဲ့ TIK TOK – အနုပညာရပ်ဝန်း
လတ်တလောမှာလည်း မြတ်သူသူရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုက ပရိသတ်တွေ သဘောကျနှစ်သက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ မြတ်သူသူကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို အပျင်းပြေဆော့ကစားပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါသေးတယ်။ ဒီ နေ့မှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ မြတ်သူသူရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက အကြီးအကျယ် သဘောကျနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။credit
ခင်ခင်ဝါးချ ? မြတ်သူသူ
ဆော့လည်းဆော့ချင်သေး စာသားလည်းမရ ခင်ခင်ဝါးချ???? Khoon Satt Myat Thu Thu
Posted by Myat Thu Thu on Thursday,6August 2020